Sheekh Cabdi Sheekhaal oo geeriyooday laguna aasay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sheekh Cabdi Sheekhaal oo geeriyooday laguna aasay Muqdisho
Muqdisho: Allaha u naxriistee Sheekh Cabdi Sheekh Axmed Eebakar oo ku magac dheeraa (Sheekh Cabdi Sheekhaal), islamarkaana shalay galab ku geeriuyooday Muqdisho ayaa maanta lagu aasay Masjidka Irshaad ee ku yaalka xaafadda Cali-Kamiin, halkaas oo ay ka qeyb galeen Xildhibaanno, Culimaa’udiin, ganacsato iyo dadweyne aad u fara badan.
Marxuumka waxa uu in ka badan 50 sano ku soo jiray faafinta diinta Islaamka, isagoo koonfurta Soomaaliyeed ka hirgeliyay Mowlacyo badan oo lagu barto diinta Islaamka, waxaana uu ka mid ahaa culimada Ahlusunna Waljamaaca.
Sheekh Faarax oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyay taariikhda Sheekha, isagoo xusay in Sheekhu uu konton sano ka badan uu fidinayay diinta Islaamka, isagoo la dagaalami jiray dadka sida qaldan diinta u fasiraya.
Culumo caan ah oo ka qeyb gashay aaska Marxuumka oo goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in Sheekha uu ahaa shaqsi ka shaqeyn jiray nabadeynta iyo sidii diinta loo fahamsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed.
Ganacsade Cabdirashiid Shire Il-qeyte oo ka mid ah ganacsatadii ka qeyb gashay aaska Sheekha ayaa tacsi u diray ehelada iyo asaxaabta uu ka tegay Sheekh Cabdi Sheekh Axmed Eebakar.
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka oo ka hadlay aaska Marxuumka ayaa ugu horeyn uga tacsiyadeeyay bulshada Soomaaliyeed geerida ku timid Sheekh Cabdi Sheekh Axmed Eebakar (Sheekh Cabdi Sheekhaal) iyagoo u rajeeyay in uu janadii fardowso ka waraabiyo.
Marxuum Sheekh Cabdi Sheekhaal ayaa da’diisa lagu sheegay 98 sano, isago ku dhashay baadiyaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, waxaana uu ifka kaga tagey saddex xaas oo waxa ay dhaleen iyo wixi ay sii dhaleen ay gaarayaan 75 qof.
Sheekh Cabdi Sheekhaal ayaa caan ku ahaa Masjidka weyn ee ku yaalla Isgoyska Cali Kamiin, halkaasoo maanta lagu aasay. Sheekha oo 90 sano jir ahaa, ayaa waxa uu muddo fog uu ku soo jiray fidinta dacwada Alle.
Masuul ka tirsan maamulka degmada Afgooye oo lagu dilay qarax haleelay gaarigiisa